Soomaali xukun khaldan lagu riday oo magdhaw u helay $525,000 oo Doollar | Xarshinonline News
Soomaali xukun khaldan lagu riday oo magdhaw u helay $525,000 oo Doollar
Posted by xol2 on June 30, 2010 · Leave a Comment
MELBOURNE,(Nnn)- Nin Soomaali ah oo si khaldan loo xukumay, loona xabsiyay kiis kufsi ah, ayay dawladda Ustaraaliya abaal-marin u siisay lacag dhan $525,000, ka dib markii lagu waayay dembigii loo xukumay, sidaana waxa faafiyay Taleefishanka ABC ee dalka Ustaraaliya.
Faarax Jaamac oo da’diisu tahay 22 jir, ayaa qaaday dedaal uu ku doonayay magdhaw, ka dib markii uu 15 bilood xabsiga ku jiray oo sambalka dhiigiisa DNA-ga oo laga qaaday laga waayay inuu la fal-galay dhiiga haweenay lagu eedeeyay inuu kufsaday xilli ay ku jirtay Kalaab habeenkii lagu caweeyo. Ninkan Soomaaliga ah ayaa la sheegay in xabsiga laga soo daayay bishii November ee sannadkii tegay, iyada oo xaakim Brett Sonnet lagu ganaaxay inuu kiiskaasi ahaa mid si aad ah u muujiyay cadaalad-darro.
Haweenayda la sheegay in la weeraray oo 48 jir ah, ayaa la sheegay inay wax yar ka xusuusato dhacdaddaas dhacday bishii July 2006-dii, isla markaana Mr Sonnet ayaa sheegay inaan weligeed wax sharraxaad ah laga siinin khatarta dhiigga DNA-ga laysugu talaali karo.
Xaakimadii Maxkamada dembigaa qaadaysay, ayaa diiday dacwaddii ninkan Soomaaliga ah ee la xidhiidhay inaanu weligii tegin Kalaabkii la sheegay inay arrintaasi ka dhacday, dabadeedna waxa lagu xukumay lix sannadood oo xadhig ah oo isku noqonayay afar sannadood inuu ku jiro xabsiga. Looyarada difaacayay Mr Jaamac ee Hina Pasha, ayaa habeen hore u sheegay Taleefishanka ABC in go’aan kama dambays ah arrintaa laga gaadhay Jimcihii la soo dhaafay. “Marka laga yimaado inuu Mr Jaamac uu faraxsan yahay, haddana wuxuu awoodaa inuu noloshiisa degenaanso uga raadin karo halka uu doono,” ayay tidhi Looyaradiisa difaacaysay.
Ms Pasha waxay sheegtay in Mr Jaamac wuxuu raadinayay raaligelin shaqsiyadeed oo uga timaada Xeer-ilaaliyaha guud Rob Hulls, kaasoo raaligelintaas si aan qarsoodi lahayn ugu soo bandhigay. Mr Hulls oo arrintaa ka hadlayay ayaa yidhi, “Dawladu may haynin waajibaad sharciyaynayay inay magdhaw siiso Mr Jaamac, balse waxay aaminsanayd in magdawgu ahaa talaabada saxa ah ee lagu dhaqaaqayo, immikana waxa arrintaa lagu wajahayaa iyadoo loo eegayo aayaha degenaanshaha nolosha Mr. Jaamac.”
Qoyska uu ka dhashay Mr Jaamac ayaa la sheegay inay tixgelinayeen talaabo sharci oo laga qaado dawlada gobolka Victoria iyo booliska oo ay sheegeen inuu argagax isku-buuq lahaa ku abuuray wiilkooda intii lagu guda jiray dacwadii ka dhanka ahayd.
Filed under dhacdooyinka
← “Komishanku waxay doorashada u maamuleen si hufan oo aqoon ku dhisan”
Xisbiga talada haya ee UDUB oo Komishanka uga digay inay ku dhawaaqaan Natiijada codbixinta sheegtayna in deegaamo badan oo lagu shubtay →